Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu na-aga AlUla si Dubai na Kuwait na flynas ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Flynas na-ebupụta ụgbọ elu mba ụwa nke mbụ na AlUla.
A ga-emepe ụgbọ elu mbụ ga-aga AlUla na Nọvemba 19, 2021, site na ọdụ ụgbọ elu Dubai International n'oge emume pụrụ iche nke ga-eme mmemme akụkọ ihe mere eme na ihe nketa nke AlUla ma kwalite ọrụ njem ikuku na-enweta mmeri nke flynas.
Malite na Nọvemba 19, 2021, ụzọ mba ụwa mbụ banye AlUla ga-esi na Dubai na Kuwait pụọ.
Ụgbọ elu mbụ na Nọvemba 19 bụ oge iji kwekọọ na mmemme egwu ọzọ na Maraya.
Faia Younan, onye na-eto eto soprano na ndị egwu ụwa ya ga-eme ndụ na Maraya n'otu ụbọchị.
Flynas, onye na-ebu ụgbọ elu mba Saudi na onye na-eduga ụgbọ elu dị ọnụ ala na Middle East, ekwupụtala mgbasawanye ụgbọ elu ọhụrụ ya gụnyere ụgbọ elu mba ụwa mbụ na-aga n'ọdụ ụgbọ elu AlUla International.
Malite na 19th Nọvemba 2021, ụzọ mba ụwa mbụ ga-esi banye AlUla ga-apụ Dubai na Kuwait. Ụzọ ụlọ agbakwunyere dịka akụkụ nke mgbasawanye gụnyere Riyadh, Dammam na Jeddah. Nkwuputa a bụ nke mbụ na ndị njem mba ụwa ga-enwe mmasị ịbanye ozugbo na otu n'ime ebe ihe ochie na akụkọ ihe mere eme kachasị mkpa n'ụwa.
A ga-emepe ụgbọ elu mbụ na-aga AlUla na 19th Nọvemba 2021, site na Dubai International Airport n'oge ememe pụrụ iche nke ga-eme ememe akụkọ ihe mere eme na ihe nketa nke AlUla ma kwalite ofufe' ọrụ njem ụgbọ elu na-enweta ihe nrite.
Na-ekwu maka ihe omume a dị ịrịba ama, CEO na ofufe Maazị Bander Almohanna kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ime ka AlUla nwetakwuo ndị njem niile nọ na mpaghara ahụ, ebe ọ na-aga nke pụrụ iche n'ezie na ọ dịghị mgbe ọ masịrị ọbụna ndị njem nwere ahụmahụ." Ọ gbakwụnyere, "Anyị nwere obi ike na mmekorita anyị na Royal Commission for AlUla ga-abụ otu n'ime ọtụtụ ihe na-enye aka iji nweta ebumnuche siri ike nke Saudi Vision 2030 na-aga n'ihu n'ọnọdụ Alaeze ahụ dị ka ebe na-eduga njem nlegharị anya mpaghara na ụwa."
Phillip Jones, Chief Destination Management and Marketing Officer for Royal Commission for AlUla (RCU) kwuru, "Ruo puku afọ, AlUla abụrụla ụzọ gafere mmepeanya. Oasis ochie anyị anabatala ndị njem na ndị ọbịa ka ha kesaa ngwa ahịa, echiche na iwu obodo. Taa bụ nnukwu ihe dị mkpa maka AlUla ka anyị ga-esokwa n'ụzọ ndị njem mba ofesi. Ndị ọbịa nwere ike ịnweta AlUla ozugbo site na ụgbọ elu flynas si Dubai na Kuwait anyị na-ele anya iwebata ndị ọbịa ọzọ na ncheta nke ebe a na-aga.
Ụgbọ elu mbụ na 19th Oge Nọvemba bụ oge dabara na mmemme egwu ọzọ na Maraya. Faia Younan, onye na-eto eto soprano na ndị egwu ụwa ya ga-eme ndụ na Maraya n'otu ụbọchị.
Usoro ụgbọ elu mba ụwa na nke ụlọ site na AlUla ga-abụ:
Ụgbọ elu 4 kwa izu n'etiti AlUla na Riyadh
Ụgbọ elu 3 kwa izu n'etiti AlUla na Dubai
Ụgbọ elu 3 kwa izu n'etiti AlUla & Jeddah
Ụgbọ elu 3 kwa izu n'etiti AlUla & Dammam
Ụgbọ elu 2 kwa izu n'etiti AlUla na Kuwait
Site na ihe ọhụrụ a dị ịrịba ama, flynas na-ekwughachi nkwa ya n'inye nhọrọ ebe njem mara mma na nke a na-achọsi ike ga-ezuru atụmanya ndị njem ya. Ọzọkwa, flynas na-achọ ka ọ na-aga n'ihu n'ọchịchọ na-eto eto na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya nke a na-atụ anya na ọ ga-enwe nnukwu nlọghachi n'oge na-abịa ka mba na-aga n'ihu na-agbake site na ajọ ọrịa COVID-19 na-enwetụbeghị ụdị ya.